Lux Apartment Downtown Serres - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVassia
Ifulethi langoku, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ibhedi inxibe i-sumie ye-anatomical kunye ne-matrasi kunye nemithombo eyahlukeneyo, ilinen yebhedi yaseDanish. Irediyetha esembindini yomntu ngamnye, umoya wokupholisa umoya. I-Wifi kunye ne-smart tv ukusefa ebhedini kunye nentambo yevodafone yemiboniso bhanyabhanya nemidlalo. Iindonga zihonjiswe ngemisebenzi yabapeyinti abaziwayo bakwaSerrai uGianakkaoudis noGeorgiadis. yokupaka, 5 imizuzu ukuhamba ukusuka kumbindi Serres, 100 yeemitha ukusuka kwivenkile enkulu kunye yokutyela ilungileyo Serres.
Indawo ebukekayo ibandakanya lokulala, ophilileyo igumbi, ikhitshi, lokuhlambela kunye ibhalkhoni. Central zokufudumeza kwiradiyetha kunye thermostat ngamnye umoya inverter. In ekhitshini uya kufumana zonke iimpahla kunye izitya eziya kuzifuna. Iinwele wokomisa .Washing iimpahla machine yokubeka ayina Ibhodi yoku-ayina. I-Smart tv yokusefa okungapheliyo kunye, i-youtube, kunye ne-vodafon tv. Ubuso, umzimba, kunye neetawuli zoboya obuthambileyo
Indawo ezithuleyo yokupaka elaneleyo phambi kule ndlu kufutshane ukuya kumbindi wesixeko ukuba ngemizuzu-5 ngeenyawo. Kwaqengqeleka iinyanga Ubulonwabele ikofu yakho kwindawo ukuhlaziyeka ngeenxa emthonjeni. Kwiimitha ezili-100 uya kufumana imakethi enkulu iMasouti kunye neyona ndawo yokutyela ibalaseleyo kwisixeko saseGreek Tastes
Umbuki zindwendwe ngu- Vassia
Unokunxibelelana nathi ngokulula kwaye ucele nantoni na oyifunayo
Unganditsalela nantoni na oyifunayo. Ndiya kuvuya ukunazisa ngayo yonke into.
Inombolo yomthetho: 00000298955
Iilwimi: English, Français, Ελληνικά, Italiano, Español